Marka lagu daro P40, Huawei waxay sidoo kale soo bandhigtay Watch GT 2e, kaaliyaha Celia, Huawei Video iyo in ka badan | War gadget
Marka lagu daro P40, Huawei waxay sidoo kale soo bandhigtay Watch GT 2e, kaaliyaha Celia, Huawei Video iyo inbadan.
Bil uun ka hor, Huawei wuxuu ku dhawaaqay in 26-ka Maarso ay si rasmi ah ugu soo bandhigi doonto Yurub, noocyada cusub ee P40 baaxad ka kooban 3 moodal iyo in aan horey u isbarbar dhigney maqaalkan iyada oo u dhigma ay la S20 kala duwan oo ay soo bandhigtay Febraayo ee la soo dhaafay.
Laakiin inta lagu guda jiro dhacdadan, ma aha oo kaliya ayaa leh Huawei P40 saddexdeeda nooc, 4 hadaan tirino qaabka Lite kaas oo suuqa ku dhacay dhawr toddobaad ka hor, iyada oo shirkadda Aasiya ay sidoo kale soo bandhigtay smartwatch cusub oo ah Daawo GT 2e, marka lagu daro kaaliye u gaar ah oo loo baabtiisay sida Celia iyo adeegyo kale.
1.1 Huawei Watch GT 2e Sooc
2 Adeegga Huawei VIP
3 Huawei Video, adeegga qulqulka Huawei
4 Celia, kaaliyaha gaarka ah ee shirkadda Huawei
Adduunyada smartwatch-ka ayaa sii kordheysa sanadba sanadka ka dambeeya, waqtigan xaadirka ahna waxay noqotay il dhaqaale oo muhiim u ah soosaarayaasha ku sii sharfaya aaladda noocan ah iyo meesha ma aanan helin cid ay maamusho Wear OS, Nidaamka hawlgalka Google.
Google waligood kalgacal gaar ah kumaysan siin nidaamka ay ku shaqeysato ee la gashado marka lagu daro bixinta xaddidaadyo taxane ah oo soo saarayaashu aysan ku soo wareegi karin haddii ay doonayaan inay adeegsadaan. Tani waxay ku qasabtay soo saarayaasha inay adeegsadaan nidaamyadooda hawlgalka, nidaamyada hawlgalka ee aadka u badan iyo isticmaalka batteriga oo hooseeya, mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee smartwatches.
Ballanqaadka Huawei ee adduunka saacadaha ayaa sii wadaya magac-bixinta ay adeegsanaysay illaa iyo hadda waxaana loo yaqaan 'Huawei Watch GT 2e'. The Soo jiidashada ugu weyn ee xaruntan ayaa ah is-maamul, is-maamul kaas oo, sida uu sheegayo soo-saaraha, uu gaarayo 2 toddobaad. Intaas waxaa sii dheer, waa la quusin karaa illaa 5 mitir, waxay bixisaa taageero in ka badan 100 waxqabadyo isboorti ah waxayna na siisaa naqshad isboorti.
Huawei Watch GT 2e Sooc
Screen 1.39-inji AMOLED
Gacaliye Kirin A1
Kaydinta 4 GB oo kaydinta
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.1 GPS Wi-Fi
Nidaamka hawlgalka Lite OS
Sensors Accelerometer xijaab dareeraha garaaca wadnaha shidma iftiinka jawiga barometerka iyo magnetometer
Resistance Waxaa la quusin karaa ilaa 50 mitir - 5 ATM
U hoggaansanaanta macruufka iyo Android
Batariga 14 maalmood
Cabbirada 53 46.8 10.8 mm
Peso Gram 43
Qiimaha 199 euros
Kiisku wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo birta ah iyo suunka ayaa lagu dhex daray, sidaa darteed ma badali karno moodooyinka kale sida haddii ay noo fidinayaan shirkado kale sida Apple iyo Samsung. Ikhtiyaarka kaliya ee loogu talagalay Watch GT 2e inuu ku habboonaado dhadhankeenna waa inuu si toos ah ugu iibsado midabka aan jecel nahay (madow, casaan iyo cagaar). Xarkaha ayaa na tusaya naqshad aad u la mid ah midka aan ka heli karno nooca Nike ee Apple Watch, oo leh godad ay ku dhan yihiin waxayna noo soo bandhigayaan xirmo suumanka lagu xiro.
Haddii aan dooneyno inaan u isticmaalno Huawei Watch GT 2e si aan ugu qiyaasno howlahayaga isboortiga bannaanka GPS, ismaamulka waxaa loo dhimay 30 saacadood, madax-bannaanida in inta kale ee moodellada ahi ay jeclaan lahaayeen inay bixiyaan markay isticmaalayaan GPS isku-dhafan.
Saacadda wuxuu si toos ah u ogaadaa hawsha aan qabanayno, ugu yaraan howlaha ugu caansan, shaqo ku habboon kuwa had iyo jeer ilooba in smartwatch loo isticmaalo in ka badan si loo arko waqtiga iyo ogeysiisyada WhatsApp. Ka sokow dareeraha garaaca wadnaha, waxaa sidoo kale ku jira dareemayaal mas'uul ka ah cabbiraadda heerka oksijiinta dhiigga ku jirta.
Huawei Watch GT 2e, ayaa suuqa ku soo gali doona 179 euro, iyo inkasta oo aysan jirin taariikh gaar ah oo la sii daynayo weli, waxay u badan tahay inay sidaas ku samayn doonto iyada cusub Huawei P40 horraantii Abriil 2020.
Adeegga Huawei VIP
Google waxay na siisaa 15 GB oo bilaash ah oo aan xadidneyn oo lagu keydiyo daruuraha sawiradeena iyo sawiradeena iyada oo loo marayo Sawirada Google. Iyadoo aan la isku darin adeegyada Google, Huawei ayaa soo bandhigtay adeegga kaydinta daruurta loo yaqaan 'Huawei VIP Service', oo ah adeeg noo oggolaanaya annaga oo adeegsanaya aqoonsikeenna 'Huawei ID,' si aan ugu haysanno sawirro sawirro ah, fiidiyowyo, barnaamijyo, taleefannada casriga ah ...
Waa lacag la'aan, annaga ayaa gacanta ku hayna 5GB kaydinta bilaash ah oo lagu daray 50 GB oo kale oo bilaash ah 12-ka bilood ee soo socda.
Huawei Video, adeegga qulqulka Huawei
Maaddaama aysan lahayn adeegyo Google ah, in kasta oo ay si fudud u rakiban karaan haddii aan baarno internetka, shirkadda Aasiya waxay na siisaa adeeg muuqaal ah oo fiidiyoow ah oo la yiraahdo Huawei Video, madal loogu talagalay 4,99 euro bishii, wuxuu na siiyaa marin u helista taxanaha iyo filimada labadaba, caalami, Yurub iyo Isbaanish labadaba.
Laakiin marka lagu daro, waxay kaloo na siisaa filimo hordhac ah, filimo aan awoodno kireysto 48 saacadood si aad ugu raaxeysato taleefannadeenna casriga ah ama kaniiniga, iyo mustaqbalka, sidoo kale qalabka kale. Waxaan ku tijaabin karnaa Huawei Video bilaash muddo laba bilood ah. Si aan u helno adeeggan, waxaan u baahanahay aaladda Huawei / Honor oo leh EMUI 5.x ama ka sare, iyo in aqoonsigeennu ka diiwaan gashan yahay Spain ama Talyaaniga.
Celia, kaaliyaha gaarka ah ee shirkadda Huawei
Kaaliyaha cusub ee suuqa yimid, wuxuu ka sameeyaa gacanta Huawei wuxuuna u sameeyaa si uu u buuxiyo la'aanta adeegyada Google. Magaceeda, Celia, wuxuu leeyahay codka dumarka iyo waxay na siisaa isla shaqeynta in aan hadda ka heli karno kaaliyeyaasha kale sida Siri, Alexa, Bixby ama Google Assistant.
Kaliya maahan inay noo ogolaato inaan dajinno alaarmiga, hubino ajandaha ama dirno farriimo, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan marin u helno muusikada aan jecel nahay, maareyno dib u ciyaaristiisa, dhaqaajino iyo joojinta qaababka casriga ah, ciyaarno taxanaha majaajillada, tarjumno liiska makhaayadaha, qaadno sawir ...
Dhammaan kuwa ka walaacsan amnigaaga iyo asturnaanta, Huawei waxay tixgelineysaa tan waxayna sheegaysaa taas aqoonsiga codka waxaa lagu keydiyaa oo kaliya qalabka, sida iPhones oo kale, oo waligeed daruur looma diri doono. Intaa waxaa dheer, waxay u hoggaansameysaa GPDR-da Yurub.
Celia waxay gacanta ku haysaa gacanta Huawei P40, waxaa lagu heli karaa Isbaanish, Ingiriis iyo Faransiis waxaana heli kara dadka isticmaala Spain, Chile, Mexico, Colombia, United Kingdom iyo France.
Marka laga hadlayo codka dumarka, uma badna in xulashooyinka uu bixiyo kaaliyaha, aan ku heli doonno ikhtiyaar ah codka ugu beddel lab, in ka badan wax kasta maxaa yeelay Celia waa magac dheddig ah (ama haddii loogu yeeri lahaa Manolo) Alexa, Siri ama Bixby waa magacyo dhexdhexaad ah, marka waxaan dejin karnaa jinsiga aan dooneyno annagoo dejinayna cod lab ama dhadig.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Qalabka la gashan karo » Marka lagu daro P40, Huawei waxay sidoo kale soo bandhigtay Watch GT 2e, kaaliyaha Celia, Huawei Video iyo inbadan.